Trailer -ka Cusub ee Mortal Kombat wuxuu ka kooban yahay Muusig laga soo bilaabo Ice Cube iyo Vince Staples - Dhaqanka Pop
Trailer -ka Cusub ee Mortal Kombat wuxuu ka kooban yahay Muusig laga soo bilaabo Ice Cube iyo Vince Staples
Fiidiyowga ka fog Kombat Mortal ah
Kombat Mortal ah wuxuu iska horkeenayaa xiddigaha taxanaha asalka ah iyo naftooda cusub ee la cusbooneysiiyay ee daabacaadda cusub-warp-y ee ciyaarta dagaalka ee muddada dheer socota.
halkee ka iibsataa fondant for keega
Dhimashada Kombat 11 waxay lahaan doonaan noocyo iskuulkii hore ee jilayaasha sida Liu Kang, Jax, Scorpion, Sub-Zero, Baraka, Sonya, Raiden iyo Kung Lao oo ka soo horjeedda iskuulkooda cusub. Si loo muujiyo kala -qaybsanaanta, trailer -ka cusub ee NetherRealm Studios'latest wuxuu kala jaray dhawaaqa u dhexeeya Ice Cube 'Check Yo Self' oo ay ku jiraan Das EFX iyo Vince Staples '' Blue Suede. ''
Ma aha markii ugu horeysay ee MK11 ayaa qabsaday xoogaa hip-hop-ka hadda ah si uu u suuqgeeyo ciyaartiisa. Waxay ku soo bandhigeen hees cusub oo 21 ah Savage filimkii ugu horreeyey ee ciyaarta, iyada oo dhimashadii Savage, gaarsiinta dilka ay si fiican ugu habboon tahay nuxurka ciyaarta. Fikradda waqtiga-foorarsiga ee ciyaarta cusub ayaa u oggolaan doonta taageerayaasha inay arkaan cusboonaysiinta muuqaalkii hore ee consoles-ka cusub, guuritaankii hore iyo dilalkii la jeclaa, kuwaas oo qaarkood lagu soo bandhigay trailer-ka dagaalka ka buuxa.
Ciyaarta cusub waxaa ka soo muuqan doona dhowr xaraf oo cusub, oo ay ku jiraan haweeneydii ugu horreysay ee madax u noqota. cod iyadoo ku dhaqmaysa dagaalyahan heer caalami ah Ronda Rousey. Rousey ayaa ku dhawaaqi doonta halyeeyga halyeeyga ah Sonya Blade. Ciyaartu waxay soo baxdaa afar sano kadib ciyaartii weynayd ee dhacday MK10 .
sida loo dubo cake strawberry leh strawberries dhabta ah
Fiiri Ice Cube iyo Vince oo wada jira si aad uga fiican sidii hore iyo kan cusub ee Johnny Cage oo ku jira taayirrada sare.
Dhimashada Kombat 11 hoos u dhigay Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One iyo PC Abriil 23.
samee dhadhanka keega sanduuq sida roodhida
sonkor lyn gadhka mike iyo dave waxay u baahan yihiin taariikhaha arooska
lakabka qoyan karinta keegga ka xoq